कट्रिनाका कारण ऋतिक–सुजैन सम्बन्धविच्छेद ! – manoranjansansar.com | A Entertainment News portal for all
कट्रिनाका कारण ऋतिक–सुजैन सम्बन्धविच्छेद !
मुम्बई, ८ माघ । बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशन र उनकी पत्नी सुजैनबीच करिब १७ वर्ष लामो बैवाहिकसम्बन्ध किन र कसरी अन्त्य भयो ? भन्ने खोजी अझै जारी छ । ऋतिक र सुजैनले केही महिनाअघि बैवाहिकसम्बन्ध अन्त्य गरेका थिए । उनीहरुको बैवाहिक जीवन अन्त्य हुनुलाई ‘दुखद’ भन्दै कारण खोज्नेहरु बलिउडमा प्रसस्त छन् ।
कतिपयले उनीहरुले कुनै सन्तान जन्माउने प्रयास नगर्नु नै सम्बन्धविच्छेदको कारण हुनसक्ने बताइरहेका छन् । अर्को कुरा लामो समयदेखि ऋतिक–सुजैन एकआपसमा मनमुटाव थियो । कुनै समय बारबरा मूरी ऋतिकको नजिक भएकी थिइन् सुजैन र्जुन रामपालसँग नजिक थिइन् । त्यसैले ऋतिक–सुजैनबीच मनमुटाव उत्पन्न भएको अनुमान गरिएको थियो तर ती सबै अनमान गलत सावित भएको छ ।
भारतीय अनलाइन न्युज पार्टलहरुका अनुसार ऋतिक–सुजैनबीच सम्बन्ध टुट्नुको कारण अभिनेत्री कट्रिना कैफ हुन सक्छिन् । किनकि, फिल्म फिल्म ‘बैंग बैंग’ को सेटमा ऋतिक र कट्रिनाबीच हिमचिम सुजैनले आफ्नै आँखाले देदेकी थिइन् । त्यसदिन देखि सुजैन आगो बनेकी थिइन् र, उनीहरुबीच बोलचालसमेत हुनछाडेको थियो । ऋतिक र कट्रिनाबीच ‘लभ एण्ड हेट’ को खेल फिल्म ‘जिन्दगी ना मिलेगी दोबारा’ को सुटिङ ताका देखि नै चल्दै आएको थियो ।
गुच्चा किन्न भाँडा माझ्थेँ– कट्रिना
जोनले विहे गर्नेबित्तिकै विपाशा कस्सिइन्